Umculo weFLB, umdlali ukuba umamele okanye ukhuphele umculo | Ubunlog
Umculo weFLB, umdlali ukumamela okanye ukhuphele umculo
Xa uqala le nkqubo, iyapapashwa njenge 'Isidlali somculo esisebenzayo'. Ujongano lwayo lubukeka lukhulu kwaye lunomdla. Isoftware iyasivumela ukuba siququzelele umculo wethu ngamagcisa, iialbham, iifolda kwaye iyahambelana noluhlu lokudlalwayo. Iphaneli esekunene iya kusivumela ukuba siguqule umgca wokudlala ngoku kwaye sibonise iingoma zengoma edlalayo. Umculo weFLB uya kwenza ukuba ubenakho ukubukela iividiyo okanye ukhuphele kwiYouTube nakwiDeezer.
1 Iimpawu eziBanzi zoMculo zeFLB
2 Faka uMculo weFLB ku-Ubuntu
2.1.1 Khupha ngaphandle
2.2 Sebenzisa njengeAppImage
Iimpawu eziBanzi zoMculo zeFLB
Inkqubo yenkqubo Ifumaneka kuphela ngesiNgesi.
Kufuneka kuthiwe Umculo weFLB usebenzisa inkumbulo eninzi, ngakumbi xa uthelekisa nabanye abadlali bomculo.
Iya kusivumela cwangcisa umculo ngamagcisa, iialbham, iifolda, kunye nohlu lwadlalwayo.
Khangela amazwi eengoma ezivakalayo, kwaye ukuba unethamsanqa iya kukubonisa kwicala lasekunene lesikrini.
Ine- umhleli wethegi.
Siza kufumana kwakhona ukhetho lwe ngokuzenzekelayo ukhuphele imifanekiso yegcisa, okanye usebenzise ezo sizigcinileyo kwikhompyuter yethu.
Siza kuba nayo Ukukwazi ukukhangela, ukudlala nokukhuphela umculo kwiDeezer nakwiYouTube. Nangona ndifanele nditsho ukuba ngelixa ndivavanya lo mdlali, ukukhuphela kunye nokudlala akusoloko kusebenza.
Inkqubo izakuvelisa ngokuzenzekelayo Imixube esekwe kwinto oyivayo.
Singamdlulisa umdlali imowudi encinci.
Siza kuba nayo Ukubonisa imikhombandlela emininzi yomculo kwilayibrari yethu.
Kukho icandelo elahlukileyo ukuba ibonisa ezona ngoma zidlalwayo, isinike ithuba lokuvelisa kwakhona lo mxube.
Inayo imixholo eyahlukileyo. Siya kuba nakho ukukhetha phakathi kwe- "Fancy dancy" (okungagqibekanga), "Fake mnyama", "Utter Black" kunye noMbulali wamehlo.
Inefayile ye- isilinganisi.
Kukhetho esiza kuba nalo ukuseta i-tab emiselweyo (Ikhaya, iiTrek, uluhlu lokudlala, amagcisa, iiAlbhamu, okanye iiFolders).
Siza kufumana kwakhona ukhetho lwe yenza okanye ukhubaze izaziso.
Faka uMculo weFLB ku-Ubuntu
Umphuhlisi weprojekthi unikezela iphakheji ye-snap kunye nenye i-AppImage. Ndimele nditsho ukuba kwinkqubo yam Ubuntu 20.04, omabini amathuba anokubonisa ingxaki encinci xa uzifaka.
Njengoko benditshilo, kulo mzekelo ndisebenzisa Ubuntu 20.04, kwaye unako faka ifayile snap pack ukuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye nokwenza umyalelo kuyo:
Xa uqala le nkqubo usebenzisa isiqalisi sayo, akukho nto yenzekileyo. Ukuba ubhala lo myalelo ulandelayo kwi-terminal, kwimeko yam impazamo yavela njengale ibonwe kwisikrini esilandelayo:
Inokuba njalo sombulula ngokwenza isikhombisi ngalo myalelo:
Kwaye emva koko singaphinda siqale inkqubo kwakhona ngeziphumo ezingcono.
ukuba susa ipakethe ye-snap yale nkqubo, kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) kuyakufuneka ubhale kuphela:
Iiphakheji ze-AppImage yifomathi yesoftware yokuhambisa isoftware kwi-Gnu / Linux. Iphakheji I-AppImage ayifaki ngokwenene isoftware. Ngumfanekiso oxinzelelweyo kunye nakho konke ukuxhomekeka kunye neelayibrari eziyimfuneko ukuqhuba isoftware oyifunayo.
Ukukhuphela ifayile yeAppImage, abasebenzisi Kuya kufuneka siye kuphela kwi iphepha lokukhupha kwi-GitHub ngesikhangeli sewebhu, okanye unokuvula kwakhona i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye usebenzise kuyo wget ngoku Landelayo:
Nje ukuba iphakheji ikhutshelwe, siyafuna yenze isebenze. Singakufezekisa oku ngomyalelo:
Okwangoku, ukuya qala uhlelo lokusebenzaInto ekufuneka uyenzile kukucofa kabini imouse okanye usebenzise lo myalelo:
Oku kunokubangela impazamo njengaleyo iboniswe kwisikrini esingentla apha ngasentla ukuba ivele. Ukuze uyisombululeKuyimfuneko ukuba ubhale kwisiphelo sendlela kuphela:
Emva koku, ukuba siqala inkqubo kwakhona, kufanele ukuba iqale ukusebenza ngaphandle kwengxaki.
Kufuneka kuthiwe esi sidlali-mculo, nangona sikhangeleka sihle kakhulu, ngokwemisebenzi kusafuneka kuphuculwe. Ngelixa ndizamile ndifumene iingxaki, ezinje xa ndongeza iifolda zelayibrari yomculo, ngamanye amaxesha ayisebenzi. Ukongeza, xa ufuna ukudlala iividiyo ezivela kuYouTube okanye kwiDeezer ikwabonisa iimpazamo ngamanye amaxesha. Kwaye ayizizo kuphela iingxaki onokuhlangabezana nazo xa usebenzisa lo mdlali.
Kuhleli kuphela ukuba oku, nangona esi sisidlali-mculo esihle, kusenokuninzi ekufuneka sikwenzile ukuze ube lolunye uhlobo lokwenyani lokusetyenziswa. Kodwa njengoko kusenzeka rhoqo ngesoftware, kufanelekile ukwazi ubukho bayo kunye nokwazi uhlaziyo lwamva, kuba ngaphandle kweengxaki ezinokubangela, inkqubo iyathembisa. Inga wazi ngakumbi ngale projekthi kwi Indawo yokugcina izinto zeGitHub.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Umculo weFLB, umdlali ukumamela okanye ukhuphele umculo
Molo apho. Andifakwanga konke konke kubadlali bomculo beLinux.
Le ilapha ayinakundiqinisekisa ngoba uthi ayilunganga.
Yeyiphi oyicebisayo, ukuba igqibelele ngakumbi kwisilinganisi, kwizandi, njl. Iya kuba kukudlala umculo esele ndinayo kwikhompyuter yam, kodwa kuya kuba kuhle ukuba ndifunda amaqweqwe, ndiwa-odole, njl., Andikhathali ngamazwi eengoma, enyanisweni andinawo yithande.
Molo apho. Ngokubhekisele kubadlali bomculo, kuxhomekeke kwinto oyifunayo kwaye uyifunayo. Ngokwam ndiyisebenzisa headset ukumamela umculo kwi-YouTube. Kodwa kungcono jonga amanqaku kubadlali bomculo abohlukeneyo esinayo kwi-Ubuntu. Uya kubona ukuba kukho iindidi ezilungileyo, kwaye zonke zinendawo enye okanye enye eyahlukileyo kwezinye.
I-Flatpak 1.12 iza nokuphuculwa kweSteam, ukulungiswa kunye nokunye
I-KDE Gear 21.08.2 yazisa ngaphezulu koPhuculo oluKhulu kwi-App ka-Agasti